noisesofspringrevolution – PVTV Myanmar
ဇန်နဝါရီ ၁၆ ရက် မှ ၂၂ ရက်အတွင်း ပျံလွှားအောင် စစ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်ချက် မြို့နယ် ၇ ခု တုန့်ပြန်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသစစ်ကွပ်ကဲရေးထုတ်ပြန်
ကျဆုံးသွားသူတွေအတွက် လောကကြီးထဲ တစ်မိနစ်စာ Music အပိုင်းအစလေး ပြန်ပေးချင်တဲ့ သဘေ…
ကျဆုံးသွားသူတွေအတွက် လောကကြီးထဲ တစ်မိနစ်စာ Music အပိုင်းအစလေး ပြန်ပေးချင်တဲ့ သဘောနဲ့ အဆိုတော် ကျားပေါက် @ ဟန်ထူးလွင်က Hashtag Challenge #noisesofspringrevolution ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ Hashtag Challenge မှာပါဝင်ထားတဲ့...
ကျဆုံးသွားသူတွေအတွက် လောကကြီးထဲ တစ်မိနစ်စာ Music အပိုင်းအစလေး ပြန်ပေးချင်တဲ့ သဘောနဲ့ အဆိုတော် ကျားပေါက် @ ဟန်ထူးလွင်က Hashtag Challenge #noisesofspringrevolution ကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့ Hashtag Challenge မှာပါဝင်ထားတဲ့ Yan Naung Soe ရဲ့ Instrumental Piece ကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။#SpringRevolution#PVTV Like – 4.6K Share – 152 Public Voice Television Facebook...
Flying. Not Falling….
Flying. Not Falling. အဆိုတော်ကျားပေါက် @ ဟန်ထူးလွင်က ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေအတွက် ရည်ရွယ် တီးခတ်ထားတဲ့ Instrumental piece တစ်ခုကိုတင်ပြီး #noisesofspringrevolution နဲ့ Hash Tag Campaign ကို စတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။...
ရွာပေါင်းစုံ ၃၁၈ ရက်မြောက်သပိတ်
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေအတွက် မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားရေးရာကော်မတီ(မလေးရှား)နဲ့ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး